နှုတ်ဆက်ရတော့မယ့် BMW ရဲ့ DCT Transmission စနစ် ! – MyMedia Myanmar
နှုတ်ဆက်ရတော့မယ့် BMW ရဲ့ DCT Transmission စနစ် !
ကားလောက အတွင်းမှာ အချိန်ကာလ ကြာမြင့်လာသည့် တိုင်အောင် ဝေဖန်မဆုံး ၊ ငြင်းခုံ မဆုံး နဲ့ နောက်ဆုံး အတိအလင်း မဆုံးဖြတ်နိုင် ကြတဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခု ရှိနေပါသေးတယ်။ အဆိုပါ အကြောင်းအရာကတော့ Sports ကားတစ်စီးမှာ Manual Transmission စနစ်သာ အသင့်တော် ဆုံး ဆိုတာနဲ့ အနာဂါတ် အတွက် Auto Transmission စနစ်ကသာ အသင့်တော် ဆုံးဆိုပြီး ကွဲပြား နေကြတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီ နှစ်တွေ တုန်းကတော့ နာမည် ကြီးကား တစ်ချို့ ဖြစ်တဲ့ Volkswagen Golf GTI နဲ့ BMW M2တို့မှာ Dual-Clutch Transmission ( DCT ) စနစ် ဟာ ကောင်းကောင်း နေရာယူနိုင်ခဲ့သေးပြီး Auto Box ရဲ့ နေရာမှာ Manual Transmission ကို ပြန်လည် အစားထိုး အသက်သွင်း နိုင်ခဲ့သေးတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် BMW ကတော့ Rapid-Fire Transmission တွေကို ဆက်တိုက် အသုံးပြုလာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် သူတို့ရဲ့ M Performance ကားတွေမှာ အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မကြာသေးမီကပဲ သမာရိုးကျ Torque-Converter Transmission စနစ်ကို ပရိသတ် အချို့က မကြိုက်နှစ်သက် သလို အနေ အထားတွေ ရှိခဲ့ကာ အခုဆိုရင်တော့ ပိုပြီးဆိုးတဲ့ သတင်းတစ်ရပ် ထွက်ပေါ်လာပြီး အဆိုပါ သတင်းအရ BMW ဟာ အဆိုပါ DCT စနစ်ကို ဖြုတ်ချ ခဲ့ပြီဆိုတာပါပဲ။
အဆိုပါ DCT Transmission စနစ် ကို ပထမ‌ဆုံး အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး BMW ကားကတော့ E 90/E 92 BMW M3ကားပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ သူတို့ရဲ့ 4.0 Liter V 8 Engine ဟာဆိုရင် Seven-Speed Getrag ပါဝင်တဲ့ M-DCT Box နဲ့အတူ အောင်မြင်မှုရခဲ့ သေးတာ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ ကတော့ F 90 BMW M5 မှာ အဆိုပါ DCT စနစ် မပါဝင်ပဲ သူ့အစား ZF Automatic Transmission စနစ် ကို အစားထိုး ခဲ့တာကြောင့် မကြိုက်နှစ်သက်မှုတွေ နဲ့ ကြုံတွေ့ ခဲ့ကြရသလို တစ်ချို့ကလည်း အဆိုပါ စနစ်အသစ်ကို အနာဂါတ်ရဲ့ Auto System တွေအတွက် ကောင်းမွန်တယ် ဆိုပြီး လက်ခံ ခဲ့ကြတာ လည်း ရှိခဲ့ ပါတယ်။ ဒီ အခြေအနေကလည်း မှန်ကောင်းမှန် နိုင်ပေမယ့် တစ်ဖက်မှာလည်း DCT ပရိသတ်တွေက Dual-Clutch System ရဲ့ မြန်ဆန်ပြီး မကြာခဏ ပြောင်းလဲ မောင်းနှင်ရတဲ့ အရသာ ကိုလည်း အတော်လေး လွမ်းဆွတ် ခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ BMW M2အမျိုးအစား ကတော့ လက်ရှိ ဈေးကွက် အတွင်းမှာ DCT စနစ် ပါဝင် ထားတဲ့ တစ်စီးတည်းသော M Car အဖြစ် သတ်မှတ်လို့ ရပြီး နောက်ဆုံး ကားတစ်စီးလည်း ဖြစ်ဖို့ များနေပါပြီ။
အဆိုပါ စနစ်အစား ZF Auto စနစ်ကို အစားထိုး အသုံး ပြုလာမယ့် အကြောင်းခြင်းရာ တစ်ရပ် ကတော့ Calibration အပိုင်းမှာ လွယ်ကူ ချောမွေ့တာနဲ့ Fuel Efficiency စနစ်ကို လည်း ပိုမို ကောင်းမွန်တာ ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂါတ်ကို မျှော်ကြည့်ရမယ် ဆိုရင်တော့ BWM ဟာလည်း အများနည်းတူ လျှပ်စစ် စွမ်းအင်သုံးမယ့် လမ်းကြောင်းကိုသာဆက်လက် လျှောက်လှမ်း တော့မှာ ဖြစ်တာကြောင့် တစ် ချိန်ချိန်မှာလည်း DCT စနစ်ကို ဖြုတ်ချရတော့မှာ ဖြစ်ကာလုံးဝ အသုံးမဝင်တော့လို့ ရပ်တန့် လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ အဖြစ်မျိုး မရောက်အောင် အခု ကတည်းက စီမံ လိုက်နိုင်တာ ပိုကောင်းတယ်လို့ပဲ ဆိုရတော့မှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကားတစ်စီးကို မောင်းနှင်ရာမှာ ခြေနင်း နှစ်ခုကို အမြဲတမ်း သတိထား နင်းနေရတဲ့ ခေတ်ကာလကောင်း တစ်ခုကိုတော့ ဘယ်တော့မှ မေ့ထား လို့မရတော့ပဲ ပျင်းစရာလည်း မကောင်းတဲ့ ကားမောင်းတဲ့ အရသာ တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း နည်းပညာ အသစ် တစ်ခုကို မဖြစ်မနေ မိတ်ဆက် ပေးရတော့မယ် ဆိုရင် တော့ အပြောင်းအလဲ အတွက် တစ်ခုကတော့ စတေးရတော့မှာဖြစ်ကာ တကယ်ကို လွမ်းဆွတ်နေရ တော့မယ့် နည်းပညာ တစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
The post နှုတ်ဆက်ရတော့မယ့် BMW ရဲ့ DCT Transmission စနစ် ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-16T15:01:20+06:30January 16th, 2021|MYCARS MYANMAR|